ငြိမ်းချမ်း| November 9, 2012 | Hits:5,734
8 | | ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကောက်စ်ဘဇား ဒေသတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ဘုရားဆင်းတုတော်တခု မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ရခိုင် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး တာဝန်ကျ အစိုးရ စစ်သား ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေး
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ကောင်ကင် November 9, 2012 - 5:24 pm	“ရာမူးက ဖမ်းမိတဲ့ ဘုရားတဆူကတော့ ဦးဇင်းတို့ ကျောင်းကနေ မာရမာကြီးတွေ ကိုးကွယ်နိုင်အောင်လို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကိုဖမ်းမိတယ်တဲ့လား??????????????
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 10, 2012 - 3:12 am	‘ကောင်ကင်’ ဆိုတဲ့ လူ – ဖွချင်လို့ မေးတာလား၊ ဒုန်းဝေးတာလား။ ဦးပဉ္စင်းက စကားပြော ပြောထားတာကို သတင်းထောက်က အပြောအတိုင်း ရေးထားတာ။ ဒါကြောင့်မို့ အဖွင့် အပိတ် သင်္ကေတလေးတွေ ထည့်ရေးထားတာ မမြင်ဘူးလား။ သိပ် မဒူနဲ့။ ဦးပဉ္စင်းမိန့်တာကို စာ စကားနဲ့ အပြည့်ရေးရရင် (ရာမူးမှာ ဖမ်းတုန်းက သိမ်းဆည်းမိတဲ့ ဘုရား တဆူ) လို့ ဆိုလိုတာ။ ရှင်းရှင်းလေး ရေးထားတဲ့ သတင်းကို လာ ဖွဘို့ ကျိုးစားနေတယ်။
Reply	phother November 9, 2012 - 10:18 pm	ဒီကောင်တွေကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကရော၊ဗုဒ္ဓဘုရားကပါအပြစ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Reply	၀ဏ္ဍ November 10, 2012 - 3:01 pm	“ဆင်းတုတော် ၃ ဆူကို စစ်တကောင်းခရိုင် ဦကီယာမြို့နယ် ကူတူပါလန်ကျေးရွာရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်း ဈေးဆိုင်တဆိုင်တွင် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီး….”